‘विश्वविद्यालयका रुपमा अगाडि बढ्न सक्षम छौं’ – YesKathmandu.com
चुडामणी शर्मा कट्टेल
कार्यकारी निर्देशक,नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन एकेडेमी (नाथम)
लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिनु भएका चुडामणी शर्मा कट्टेल हाल नाथममा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । लामो समय द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउनु भएका कट्टेल विगत चार वर्ष देखि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन एकेडेमी (नाथम) मा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यो बीचमा उहाँले नाथममा थप पर्यटन र होटल व्यवस्थापनको स्नातक तहमा थप ४० ४० कोटा उहाँकै पहलमा थपिएको छ । यस्तै नाथमलाई विश्वविद्यालय बनाउने पहल समेत अगाडि बढिरहेको छ । प्रस्तुत छ,नाथमकै सेरोफेरोमा रहेर कार्यकारी निर्देशक कट्टेलसँग www.yeskathmandu.com ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
नाथमले अहिले के कस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?
२०२९ सालमा युनडिपीको सहयोगमा होटल म्यानेजम्यान्ट टेर्निङ सेन्टरको रुपमा (HMTT) स्थापना भएको हो । विभिन्न तालिमहरु संचालन गर्दै यसले २५ वर्षसम्म टुरिष्ट गाइड, ट्रेकिङ गाइड, र्याफटिङ गाइड आदि तालिमलाई निरन्तरता दिएको हो । वि स.२०५६ सालमा शैक्षिक पाठ्यक्रम थपियो । जसअन्तर्गत होटेल व्यवस्थापनको स्नातक तह संचालन सुरु भयो । त्यस्तै २०६२ सालमा पर्यटन विषयको स्नातक तह BTTM २०६८ सालमा हस्पिटालिटीको स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MHM को सुरुवात भयो । यी सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त हुन । नाथमले विशेष गरी प्राविधिकलाई ध्यान दिने गरेको छ ।
हाल यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
नाथमबाट शिक्षा र ज्ञान पाएका, यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिहरु क्रियाशिल छन् । नेपालमा रहेका अधिकांश गाइडहरु हाम्रै उत्पादन हुन । यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति वेरोजगार छैनन । यहाँबाट BTTM गर्नेहरुमध्ये ९१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु काम गरिरहेको छन् । ३० प्रतिशत नेपालमा, अधिकाम्स अमेरिका, युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा पुगेका छन् । त्यस्तैै यहाँबाट BTTM गर्ने विद्यार्थीहरुमध्ये ७० प्रतिशत नेपाल लगायत विदेशी विभिन्न वायु सेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी लगायत पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध छन् । यहाँबाट BTTM गरेका विद्यार्थीहरुमध्ये ९३ प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगारीमा संम्लग्न छन् । यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो संस्थाबाट शिक्षित/प्रशिक्षित भएका विद्यार्थीहरु काम नपाएर भौतारिरहेको अवस्था छैन । नाथमले राष्ट्रको आर्थिक सम्वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याईरहेको छ ।
तपाईहरुले यसको गुणस्तरमा कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
स्थापना देखि नै हामीले गुणस्तरीयतामा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गरेनौं । जब हामीलाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान ग¥यो । हामीसँग जोडिएर काम गर्ने ILO,UNDP जस्ता विदेशी संस्थाहरु आए । यो पछाडि हाम्रा कार्यक्रम र दायरा अझै फराकिलो बन्यो । शैक्षिक पाठ्यक्रमको अलवा प्राटिकलमा हामीले विशेष जोड दिँदै आएका छौं । प्राटिकल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्रोत साधन हामीसँग छ । त्यस्तै अर्काे विशेषता भनेको विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरु हुन । हाम्रो कलेजले अहिलेसम्म राजनीतिको प्रभावबाट पूर्ण मुक्त छ । एक दिन पनि बन्द, हड्ताल भएको उदाहरण छैन । हामीकहाँ नेता बन्ने भन्दा पनि राम्ररी पढ्ने, सिक्ने ,दक्ष बन्ने वातावरण रहेको छ । अर्काेतर्फ आर्थिक हिसावले पनि सबल छौं तसर्थ गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं ।
शुल्क र गुणस्तरका हिसाबले नाथम धेरै विद्यार्थी/अभिभावकको रोजाईमा परेको छ । तर,कोटाको सिमाको कारण धेरै विद्यार्थी नीजी कलेजमा पढ्न बाध्य छन् । कोटा बढाउने सम्बन्धमा केही योजना बनाउनु भएको छ ?
विश्वविद्यालयसँग कोटा थपको माग गरिरहेका छौं । हामीले पनि धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिन खोजेका छौं । हामी थप विद्यार्थी पढाउन, सेवा दिन सक्षम हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयका व्यवस्ताका कारण कोटा थप्न सकिरहेका छैनौं । यस सम्बन्धमा विभिन्न बैंठकमा कुरा उठेका पनि हुन तर कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।
नाथमलाई पर्यटन र होटल व्यवस्थापनको विश्वविद्यालय बनाउने कुरा चलेको धेरै भयो, यसको प्रक्रिया के हुँदै छ ?
ठूलो संस्थाको पुच्छर समातेर सधै कति बस्ने ? हामीलाई नै पर्यटन विषयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । जसरी यो क्षेत्रको तालिमको जिम्मा सरकारले हामीलाई दिएको छ । तर, एकेडेमीको जिम्मा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मातहतमा छ । हामीसँग विश्वविद्यालय सञ्चालको लागि सबै वातावरण छ । तर,अधिकार नपाएको कारण नाथमलाई विश्वविद्यालय बनाउन सकेका छैनौं । पर्यटन विषयका विभिन्न पाठ्यक्रमहरु हामीले नै निर्माण गर्न पाउने र यसको सर्टि्फिकेटहरु हामी मार्फत नै वितरण गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । पर्यटनको सम्पूर्ण कोर्ष नाथम मार्फत गर्ने हाम्रो माग हो । नाथमलाई पर्यटनमय बनाउने हाम्रो चाहाना हो । यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष कागजात पठाईसकेका छौं । मन्त्रालय सचिव, लगायत सरकारोवालासँग छलफल भई हाम्रो बोर्डले पनि पास गरिसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै विषय समेटेको छ । उस्लाई धेरै बोझ पनि छ । पर्यटन विषयको मात्रै हामीलाई जिम्मा दिने हो भने हामी विश्वविद्यालयका रुपमा सबै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने थियौं ।
यहाँ आफैं विगत चार वर्ष देखी यो संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ । यसवीचमा के के प्रगति भए ?
म यँहा आएपछि भएका श्रोतसाधनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थी संख्या थप्नका लागि निकै मेहेनत गरे । विश्वविद्यालयबाट कोटा ल्याउन निकै कठिन हुँदो रहेछ । म आएपछि द्यज्ःरद्यत्ः र मा ४०/४० सिट थप भयो । त्यस्तै प्राक्टिकल होटल मुद्धाका कारण रोकिएको थियो । म आएसँगै मुद्धा फुकुवा भयो । यसको काम अगाडि वढेको छ । होटललाई भाडामा दिने काम अगाडि बढेको छ । महानगरपालिकामा होटेलको जग्गा पास गर्ने कार्य निकै सकसका साथ सम्पन्न भयो । यसलाई विश्वविद्यालय वनाउन विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न विश्वस्तरीय प्रदर्शन समारोह सम्पन्न गर्न छलफल भएको छ । हामिले थाइल्याण्डको राजाभाट विश्वविद्यालयसँग सम्झौंता गरेका छौं । त्यस्तै द्यएह्क्ष् चाइनासँग सम्झौंता भएको छ । ती विश्वविद्यालयहरुमा इन्टर्न गर्न हाम्रा विद्यार्थीले मौका पाउने भएका छन ।
चाहेर पनि यो अवधीमा गर्न नसक्नु भएको केही छ ?
लाखौं प्रयास गरेर पनि नसकेको विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु हो । अबको मुख्य काम÷चुनौती नैं यही हो । विभिन्न तालिमहरु चलिरहेको छ । विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम भैरहेको छ । नेपालले विदेशका विशेष गरी सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिई सार्क राष्ट्रको प्रत्येक देशको एक÷एक विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउने र एक जना सशुल्क पढाउन खोजिएको हो । तर विभिन्न नियमका कठिनाईका कारण पूरा गर्न सकिएन ।
आफ्नो कार्यकालको मुल्यांकन गर्दा तपाई कतिको सफल ठान्नुहुन्छ ?
पर्यटन मन्त्रालयबाट केही वर्षका लागि यो संस्थाको नेतृत्व लिने गरी पठाइन्छ । तर अवस्था कस्तो छ भने, यहाँको संरचना थाहा पाउन एक वर्षले पुग्दैन । म शिक्षण पृष्ठभूमीबाट आएको व्यक्ति हुँ । स्कुल नभएको स्थानमा आफैंले विद्यालय निर्माण गरेर २२ वर्ष प्राचार्य भएर सम्हाले । एउटा गति दिँए । विभिन्न शिक्षक संगठनको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुँ । गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा विना पारिश्रमिक काम गरे । यी र यस्तै अनुभव भएको व्यक्ति हुँ ।
म यहाँ नेतृत्व लिन आँउदा सुविधा सम्पन्न थियो । मात्र खाँचो थियो गुणस्तरीयताको । तसर्थ मैले यँहा आएपछि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिए । म कति सफल /असफल त्यस्को मुल्यांकन आफैंले गर्नेभन्दा अरुलाई छोडिदिन्छु । बस, जति समय काम गरें पूर्ण इमान्दार भएर काम गरे ।
आगामी नेतृत्तबाट के–कस्ता अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
आगामी नेतृत्वले पूरानो चिजलाई अगाडि लैजाने मात्र हो । नाथम एउटा सिस्टममा चलेको छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो । खाँचो त आगामी नेतृत्वले यस्लाई विश्वविद्यालय वनाउन पहल गरोस् भन्ने हो मैले देखेको सपना यही हो । जो मैले पूरा गर्न सकिन । नाथमलाई परनिर्भर होइन आफ्नै खुट्टामा उभिने वनाउनु पर्छ । यसलाई छुट्टै विकास ऐन ल्याएर स्वचालित वनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन विषय लिएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई के सल्लाहरसुझाव दिनुहुन्छ ?
पहिलो त, नेपालको प्रकृति नै अद्धितीय छ । संस्कृति सभ्यतामा विविधता छ । प्राकृतिक सौन्दर्य संसारकै अलौकिक छ । खाँचो छ त यी प्रकृति/ संस्कृतिलाई प्याकेज वनाएर विदेशीलाई बेच्न । खाँचो छ,यस प्रकारको सेवा सुबिधा दिनका लागि हामी सक्षम बन्न । त्यही क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले पर्यटन र होटल व्यवस्थापनमा पढ्नुपर्छ । हामीसँग भएका यी स्रोत साधनको प्रयोगबाट मनग्य आर्थिक लाभ लिन सक्छौ । अरु विषय पढेर काम खोज्दै हिड्नुभन्दा यो विषय पढेर थोरै समयमा नै आर्थिक लाभ लिन सक्ने हुँदा यो विषयको महत्व छ । पढ्न आग्रह गर्दछु ।
पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै यथेष्ट विकास हुन नसक्नुको कारण के ठान्नुहुन्छ ?
सर्बप्रथम हामीसँग आधारभुत आवश्यकता भएनन् । एउटा विदेशी पर्यटक आएर घुम्न चाहेको ठाँउमा सहजै उ पुग्न सक्दैन । खोजिएका सुविधा तत्कालै उपलव्ध छैनन् । खोजिएका जस्ता गाईडहरु छैनन । पर्यटकका लागि सबै स्थानमा बस्ने, खाने योग्य ठाँउ छैन् । हवाई यातायात सहज छैन । सडक यातायात जल यातायातको राम्रो व्यवस्था छैंन । यसरी यी विभिन्न संरचनालाई निर्माण गर्ने पर्यटकीय गतिविधी संचालनको खाका तयार गर्ने लगाएत काम गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । हामीसगँ भएका प्रकृति संस्कृतिलाई उपयोग गरी पर्यटनको विकास मार्फत हामी आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्छौ्